Waxyaabihii laga bartay kulankii EPL ee ay Man United guusha ka gaartay kooxda Everton… (Muxuu ka dhignaa goolkii madiga ahaa ee Martial?) – Gool FM
Haaruun April 4, 2016
(Manchester) 04 Abriil 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kulan ka tirsan Premier League waxa ay guul ka gaartay Everton oo ay garoonkeeda ku soo dhawaysay.
Ciyaartii ka dhacday garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester ayaa ku soo idlaatay 1-0 lagu dardaray kooxda Everton, waxaana goolkaas madiga ah Man United u dhaliyey 54’daqiiqo Anthony Martial.
>- Anthony Martial ayaa dhaliyey goolkii kumaad (1,000) ee Man United ay Premier League ku dhaliso garoonkeeda Old Trafford.
>- Manchester United ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee 1,000 gool oo Premier League ah ku dhalisa garoonkeeda, 22 bishii Agoosto sanadkii 1992-kii Denis Irwin ayaa goolkiisii ugu horreeyey Old Trafford ugu dhaliyey ciyaar ay barbaro 1-1 la galeen kooxda Ipswich Town.
>- Manchester United ayaa noqotay kooxda ugu shabaq nadiifis badan Premier League xilli ciyaareedkan, waxaana iyadoo aan gool laga dhalin ay garoonka ka baxeen horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 15-jeer.
>- Anthony Martial haatan waa ciyaaryahanka ugu goolasha badan Man United Premier League xilli ciyaareedkan, waxaana uu dhaliyey 8 gool, xiddigaha ku soo xiga waa W. Rooney oo 7 gool leh, J. Mata (5) iyo J. Lingard (4).
>- Everton ayaa khasaartay kulankeedii 200-aad ee Premier League oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda, kaliya Newcastle ayaa ka badan oo bannaanka looga soo adkaaday tartankan 203-kulan.
>- Manchester United ayaa markii ugu horreysay afar kulan oo xiriir ah garoonkeeda guul ku gaartay horyaalka Premier League, tan iyo bishii April sanadkii 2015.
>- Manchester United ayaa guusheedii 50-aad garoonkeeda kaga gaartay kooxda Everton, haddii aynu si kale u dhigno Everton ayaa 50-jeer looga adkaaday Old Trafford.
>- Man United ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso qeybta hore ee ciyaarta 11 ka mid ah 15-kii kulan ee Premier League ay ku ciyaartay garoonkeeda ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
LA ISKUMA SALAAMIN: ''Maxi Lopez waa jaahil'' - Icardi & Max oo aan mar kale isa salaamin! + Sawirro
Kooxda Chelsea oo lagu wado inay maanta oo Isniin ah si rasmi ah ugu dhawaaqdo heshiiska tababaare Antonio Conte, kaasoo London ku sugan